Tungsten Carbide သေဆုံးခြင်း။
Tungsten Carbide တူးဖော်ရေးကိရိယာများ
carbide ခလုတ်ကာဗိုက်တုံးများကာဗိုက် HPGR ကြယ်သီးများဆောက်လုပ်ရေးအတွက် ကာဗိုက်အကြံပြုချက်များဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ ကာဗိုက်အကြံပြုချက်များ
Tungsten Carbide Blades များ
ထိပ်တန်း လူကြိုက်များသော ထုတ်ကုန်များ
ကာဗိုက်ချောင်းများကာဗိုက်အစင်းများHardfacing materialCarbide burrsCarbide diesCarbide mining toolsCarbide bladesTungsten carbide carbide toolsPDC ဖြတ်စက်များ
Tungsten Carbide Rodsကာဗိုက် burrsTungsten Carbide StripsTungsten Carbide သေဆုံးခြင်း။Tungsten Carbide တူးဖော်ရေးကိရိယာများTungsten Carbide Blades များPDC ဖြတ်စက်များကာဗိုက်ဘောလုံးနှင့် ထိုင်ခုံများHardfacing material
ထိပ်တန်း လူကြိုက်များသော ထုတ်ကုန်များကုမ္ပဏီသတင်း
ZZBETTER သည် PDC ဖြတ်စက်များ၊ ကာဗိုက်ခလုတ်များနှင့် ကာဗိုက်ချောင်းများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည်မှာ 15 နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းတို့တွင် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ထမ်းများအားလုံးသည် ကောင်းမွန်စွာ လေ့ကျင့်သင်ကြားပြီး အတွေ့အကြုံရှိကြသည်။
Tungsten carbide rods များသည် drill bits များ၊ end-mills ၊ reamers ၊automobile special cutters ၊ engine special cutters များ ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။
လုပ်ငန်းသုံး Tungsten carbide strips များသည် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် ချေးခံနိုင်ရည်ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ဘိလပ်မြေကာဗိုက်မိုင်းကိရိယာများကို ကျောက်တူးကိရိယာများ၊ ကျောက်မိုင်းတူးခြင်း၊ တူးဖော်ခြင်း၊ ဥမင်တူးခြင်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးပြုရန်အတွက် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။
ပုံဆွဲသေခြင်းကို ယေဘူယျအားဖြင့် ဝါယာကြိုး၊ လှံတံ၊ ဘားနှင့် ပြွန်ဆွဲရန် အသုံးပြုသည်။
ZZBETTER အကြောင်းZhuzhou Better Tungsten Carbide Co., Ltd သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး အဖြိုက်စတင် ကာဗိုက်ထုတ်လုပ်သည့် နေရာဖြစ်သည့် ဟူနန်ပြည်နယ်၊ ဇူကျိုးမြို့၌ တည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် tungsten carbide တွင် အထူးပြုထားသော စက်ရုံတစ်ခုရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့ မထုတ်လုပ်နိုင်သော အခြားထုတ်ကုန်များစွာကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး အကောင်းဆုံးသောစျေးနှုန်းဖြင့် ထုတ်ကုန်များကို ရယူလိုသူများအတွက် အရင်းအမြစ်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များဆီသို့ ကတိပြုထားသည့် နည်းပညာကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။※ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ သင် အဘယ်အရာကို ရှာတွေ့နိုင်သနည်း။1. PDC ဖြတ်စက်များ2. Tungsten Carbide...
အရည်အသွေးကောင်းမည်သည့် Third Party Inspection ကိုမဆို လက်ခံရန်
ZZBETTER သည် လျင်မြန်သော တုံ့ပြန်မှုနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုရှိသော ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်သည်။ သင်၏စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကို တုံ့ပြန်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံရှိပြီး အရည်အချင်းပြည့်မီသောအဖွဲ့မှ 24 နာရီအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များ သို့မဟုတ် အခြားသော ကိုးကားမှုများအတွက်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် ကြိုဆိုပါသည်။
Tungsten carbide ပျဉ်းကတိုး
Tungsten carbide ပုံဆွဲသေတယ်။
K10 K20 K30 K40 အစိုင်အခဲ ကာဗိုက်ချောင်းများနှင့် မြေပြင်
Rotary File Flexible Shaft Shank Carbide Burrs အတွက် Cemented Carbide Blank Burs
Tungsten Carbide Drawing သည် Drawing Tube အတွက် သေဆုံးသည်။
အရည်အသွေးမြင့် ဘိလပ်မြေကာဗိုက်အကန့်/ဘား/ပန်းကန် သစ်သားလုပ်ငန်း widia တန်စတင်ကာဗိုက်ဘားဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာ
ပင်ဦးခေါင်းပါသော ကာဗိုက် HPGR တုံးများ
ကျောက်မီးသွေးတူးဖော်ခြင်း PDC cutter Flat PDC ခလုတ်များကို အသုံးပြုသည်။
Tungsten carbide mining strips များသည် cemented carbide sand crushing strips များ
ကတ်ထူဖော့ဘုတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း အဖြိုက်နက် ကာဗိုက်ပါးပါး အဝိုင်း ဓါးပြား ဖြတ်တောက်ခြင်း ဓါး
ကြေးနီ သို့မဟုတ် နီကယ် တန်စတင် ကာဗိုက် ပေါင်းစပ် ဂဟေချောင်းများ
ထည့်ပါ။ : Huanghe မြောက်လမ်း၊ Tianyuan ခရိုင်၊ Zhuzhou မြို့၊ Hunan ပြည်နယ်၊ ၄၁၂၀၀၀
အီးမေးလ် : sales8@zzbetter.com
ဖုန်း : 0086 136 4733 8188
 ကာဗိုက် burrs
 Tungsten Carbide သေဆုံးခြင်း။
 Tungsten Carbide တူးဖော်ရေးကိရိယာများ
 Tungsten Carbide Blades များ